Fiantsenana any Kildare - IntoKildare
Shopaholics, Fitsidihana voalohany, Zavatra tokony hatao
Ho an'ny traikefa farany fiantsenana farany, hadinoy ny mametraka ny pasipaoronao ary manandrana manentsina tavoahangy fanosotra kely ao anaty baggies neken'ny seranam-piaramanidina alohan'ny hidiranao amin'ny sidina mankany London na Paris - Kildare no toeram-pivarotana vaovao amin'ny sari-tany miaraka amin'izay rehetra tadiavinao sy maro hafa.
Fitsangantsanganana fohy, hitsambikina ary hitsambikina avy any amin'ny toerana rehetra any Irlandy, amin'ny làlana na ny lalamby, Kildare dia manana fiantsenana be dia be izay hahatonga anao sy ny kitapom-bolanao ho be atao. Ny lehibe indrindra amin'ireo, araka ny fantatry ny mpivarotra mahay rehetra dia ny Kildare Village Outlet izay manolotra hatramin'ny 60% amin'ny marika mpamorona.
Ary amin'ny fahavaratra dia saika tsy mbola nisy fialan-tsasatra tsaratsara kokoa hamelezana ny plastika ary hanavao ny fitafianao amin'ny sanganasa mpamorona vitsivitsy. Makà lamaody mijery boutiques toa an'i Anya Hindmarch, Lulu Guinness ary Kate Spade, amboary ny tongotrao ao amin'ny LK Bennett sy Kurt Geiger, omeo kitsch voninkazo ao an-dakozanao ao an-tranon'i Cath Kidston, rohy ny efitranonao any Bedeck na omeo ny trano fidiovana misy trano fandraisam-bahiny ao Molton Brown.
Kildare Village Outlet nanova ny traikefany miantsena ho endrika zavakanto - manala ireo fihenjanana rehetra mifandraika amin'ny fiantsenana afovoan-tanàna. Ny toeram-pivoahana dia namarana ny fahasosorana lehibe - kitapo - tamin'ny alàlan'ny fanolorana safidy maimaim-poana amin'ny € 5 izay hanangonana sy hividianana anao any amin'ny biraon'ny fampahalalana mandra-panaonao vonona ny hanangona azy ireo.
Aza hadino ny mitsangatsangana amin'ny Newbridge Silverware Visitor Centerary Museum of Style Icons koa. Ny tranombakoka, izay misy fitafiana anaovan'ireo angano an-tsarimihetsika toa an'i Audrey Hepburn sy Elizabeth Taylor, dia hanome aingam-panahy ny safidinao lamaody. Avy eo, mijoroa am-po amin'ny sombin-tsakafo Newbridge tsara tarehy amidy ao amin'ny Showroom.
Raha tsy anao ny entan'ny mpamorona, dia misy safidy maro hafa any Kildare. Mandehana mitsangatsangana any amin'ny WhiteWater Shopping Center akaiky anao miaraka amin'ireo fivarotana vatofantsika Debenhams, M&S ary H&M, miampy mpivarotra enina mahery miisa 60 ao anatin'izany i Karen Millen, Zara ary Carraig Don.
Fivarotana asa tanana sy tsenan'ny tantsaha
Raha toa ianao ka tsy mirehareha amin'ny trano fivarotana, dia feno tsena i Kildare mba hamoahana ny filanao.
Ny tsenan'i Naas Country dia atao isaky ny zoma ao amin'ny lapan'ny tanàna manomboka amin'ny 9.45 maraina-12.15 hariva ary manolotra vokatra azo avy eo an-toerana, mofo, fametahana artisan, voninkazo ary asa tanana. Mandehana mivezivezy manodidina ny Crookstown Craft Village, sokafy ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 am-6 hariva, ary zahao ireo mpanakanto manao hosodoko, mpanefy tanimanga amin'ny kodiarana sy knitters izay mihodina kofehy ary manamboatra akanjo amin'ny karazan-tànana vita tanana rehetra amidy.
Raiso ny torohevitray - tsy ho vitanao izany rehetra izany ao anatin'ny iray andro ka manorata efitrano ao amin'ny iray amin'ireo B & B marobe ao Kildare, trano fandraisam-bahiny manokana na trano fandraisam-bahiny lafo vidy hahafahanao miparitaka amin'ny fitsaboana antsinjarany mandritra ny faran'ny herinandro ary hialana amin'ny fanenenan'ireo mpividy. Eny eny, ary manaova kiraro ahazoana aina!
ShopaholicsFitsidihana voalohanyZavatra tokony hatao